मन्त्रिपरिषद्का २० निर्णय : विप्लवदेखि राजदूतलाई मन्त्रीको हैसियतसम्म
सरकारका प्रवताक्तासमेत रहेका संचार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको व्यस्तताका कारण पाँच बैठकका निर्णय एकैपटक सार्वजनिक भएका हुन ।
यो बीचमा सरकारले नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । विप्लवका गतिविधि संविधान विरोधी र विध्वंशकारी भएको भन्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
त्यसैगरी, यसबीचमा सरकारले अवैध हातहतियार सरकारलाई बुझाउन सूचना जारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य र अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्कीलाई नेपाल सरकारको मन्त्रीसरह मर्यादा कायम गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णयहरू :
६. निम्न प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ– क) १३२-३३ के.भी. सुनवल सवस्टेसन निर्माण गर्न। ख) दोर्दी कोरिडोर १३२ के.भी. प्रशारणलाईन निर्माण गर्न। ग) निलगिरी खोला–२ क्यासकेड जलविद्युत आयोजना (६२ मे.वा) निर्माण गर्न। घ) सान्जेन (माथिल्लो) १३२ के.भी. प्रशारणलाईन निर्माण गर्न ।